दरिद्रता भित्र्याउने यी ७ चिजहरु घरमा कहिल्यै नराख्नु ,नत्र असफलता मात्रै हात लाग्छ
२०७२ आषाढ २३, बुधवार मा प्रकासित
घरमा सुख र शान्ति र समृद्धि रही रहे यसको लागि पुरानो समयदेखि कयौं परम्परा प्रचलित छन् । यो परम्परा अलग अलग बस्तु र कामसँग जोडिएको हुन्छ । सबैको घरमा केही न केही वस्तु टुटेफुटेको हुन्छ । बेकार हुन्छ । फेरी कुनै कुनामा परि रहन्छ । ७ यस्ता बताईएको छ जो टुटफुट अवस्थामा घरमा नराख्नु राम्रो हुन्छ । यदी यस्ता चीज घरमा रहेसम्म नकारात्मक असर परिवारको सबै सदस्यमा हुनेछ । जसले गर्दा मानसिकतनाव बढ्छ र काममा गती नै बन्दैन । यस कारण धनसम्बन्धी कार्यमा पनि असफलता मात्रै हात लाग्छ । घरमा दरिद्रताको आगमन हुन सक्छ ।
थाहापाई राख्नुहोस् ति सात कुराहरु
प्राय मानिसहरु कुनै न कुनै बेला काम लाग्न सक्छ भनेर टुटे फुटेका भाँडाकुँडा घरका कुना कुनामा राख्ने गरेका हुन्छन् । तर त्यसरी टुटेफुटेका सामान घरमा राख्नाले लक्ष्मी बेखुशी हुन्छिन् र दरिद्रताको प्रवेश हुन सक्छ । त्यसैले टुटेफुटेका भाँडाकुँडा घरमा राख्नाले काम नलाग्ने बस्तुले घरफोहर देखिनुका साथै बास्तु दोष उत्पन्न हुन्छ ।फलस्वरुप अनिष्ट मात्र हुन्छ ।
२. टुटेको ऐना
टुटेको ऐना राखनु वास्तुको अनुसार एक ठूलो दोस हो । यस दोसको कारण घरमा नकारात्मक उर्जा सक्रिय हुन्छ । अथवा परिवारका सदस्यलाई मानसिक तनावका सामना गर्नुपर्छ ।
वैवाहिक जीवनमा सुख शान्ति को लागि जरुरी हुन्छ कि पतिपत्नीका पलङ टुटेको नहोस् । यदी पलङ ठीक छैन भने पतिपत्नीको वैवाहिक जीवनमा अनेकौं व्यवधान हरु आउने सम्भावना बढ्दै जान्छ ।
खराब घडी घरमा राख्नु हुँदैन । यसले के जनाउँछ भने घडीको स्थितिबाट हाम्रो घरपरिवारको उन्नती प्रगति हुन्छ । यदी घडी सही छैन भने परिवारको सदस्यको काम पुरा गर्नमा बाधा पर्ने र सामाना गरेका कामपनि समयमै पुरा नहुने आदी हुन्छ ।
घरमा टुटेफुटेका तस्बीर हरु छन् भनेपनि हटाई हाल्नु पर्छ । बास्तुका अनुसार यस्ता बस्तु दोष युक्त मानिन्छ ।
मुख्य ढोका झ्यालढोका पनि टुटेका छन् भने तिनीहरुलाई पनि फेर्नु या मर्मत गरिहाल्नु पर्छ यसले पनि नकरात्मक उर्जा प्राप्त गर्छ शुभकार्य हुन दिँदैन ।
दैनिक प्रयोगमा आउने फर्निचरहरु पनि टुटेफुटेका छन् भने तिनलाई पनि मर्मत गरिहाल्नु राम्रो किनकी वास्तु अनुसार टुटेका फुटेका चिजबस्तु सँगालि राख्नु शुभ मान्दैन । घरमा समस्या मात्रै देखिन्छ । कुनै पनि काम तुरुन्त सफल हुँदैन ।एरेडियोअडियो डटकम बाट साभार गरियको ।
हार्दिक समबेदना गोपाल सिंह खत्री
यी खाने कुरा खानुस् पेटको बोसो घटाउन
बेसारका ६ चमत्कारिक फाइदा यस्ता छन्
महिला हराएको सुचना ।।।
सिन्धुपाल्चोकमा आफ्नै एक वर्षीय छोराको हत्या
तनहुँको मालेबगरमा ह्याम्मरले हानेर श्रीमतीको हत्या
टीकापुरमा ५२ वर्षीय बृद्धले १३ वर्षीया नातिनीलाई गर्भवती बनाए
अछाममा घरमै सुतिरहेकाबेला चितुवाको आक्रमणबाट १३ वर्षीया किशोरीको ज्यान गयो
चार वर्ष विदेशमा कमाएको पैसा श्रीमतीले लिएर भागेपछि कञ्चनपुरमा श्रीमानको बिजोग
किन राती सुत्दा कहिल्लै भान्सा कोठामा जुठो भाडा राख्नु हुँदैन ?
मटन बिरयानी बनाउन आउदैन भने यसरी बनाउनुस
गोरखामा आफ्नै भान्जीलाई बलात्कार
धरानमा एकसाताकी सुत्केरी महिला बलात्कार
यार्सा संकलनका क्रममा एकको मृत्यु
बाढीले घर भत्काउँदा एक जनाको मृत्यु
रामेछाप ओख्रेनी दुर्घटना : मृतकहरुको परिचय खुल्यो (नामावलीसहित)
नदीमा डुबेर बालकको मृत्यु
वन्यजन्तु अपराधमा संलग्न दुई सय ५५ जना कारबाहीमा
बालअधिकारको विषयमा बहस १४ वर्षे बालक कारागारमा
जाजरकोट ढिमेमा घाँस काट्न गएको बेला सुत्केरी, जन्मेलगत्तै शिशुको मृत्यु
गुल्मीमा १४ वर्षीय एक बालकले ११ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरे